China Chiiz Usoro Factory, Chiiz Usoro Supplier
Pneumatic Chiiz Pịa
JINGYE oyi cIgwe ihe a na-agbanye ọkụ bụ ihe bụ isi, igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, na-eji ikuku na-agbakọ iji rụọ ọrụ nke ọma. ọ bụrụ mkpa a cheese pịa 50-150 n'arọ chiiz, dị nnọọ ka free kpọtụrụ us.If ị hụghị a kwesịrị ekwesị cheese pịa igwe na-ezukọ gị mkpa, ma ọ bụ na-erikpu nhọrọ, dị na-akpọ anyị. Anyị ga-etinye ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na ọrụ iji rụọ ọrụ maka gị. Iji wuo ụlọ ọrụ mmepụta mmiri ara ehi ka mma nke nwere ngwaahịa mmiri ara ehi dị mma.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịmalite na mmiri ara ehi dị ka ihe mgwa, cheese VAT dị mkpa. Ọrụ ya ndị bụ isi bụ nsị mmiri ara ehi na ịkwadebe mmiri ara ehi; usoro ndị a bụ ihe ndabere nke chiiz ọdịnala.
JINGYE Chiiz Vat hụ na ejiri njikwa nke ọma rụọ ọrụ, na-eme ihe nro ma na-akpali akpali.
Nwayọọ nwayọọ nwayọọ na-erugharị nke ngwaahịa ahụ na-ebelata nkewa nke ihe ndị na-eme curd ma na-ezere ntinye nke ihe na ala.
Emebere niile na SUS 304/316 igwe anaghị agba nchara, kwadebere ya na kpo oku / usoro dị jụụ ma kwadebere ya CIP usoro nhicha akpaka.